गौरी लङ्केशको अन्तिम सम्पादकीय – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsगौरी लङ्केशको अन्तिम सम्पादकीय
September 6, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, बहस, मुख्य समाचार 0
यो सम्पादकीय 16 पन्नाको उनको पत्रिका ‘गौरी लंकेश पत्रिके’ मा छापिएको अन्तिम सम्पादकीय हो। हरेक हप्ता निस्कने पत्रिकाको 12 सेप्टेम्बरको अङ्कमा यो सम्पादकीय छ। कन्नड भाषामा लेख्ने गौरीको यो सम्पादकीय हिन्दीबाट नेपालीमा रुपान्तर गरिएको छ- खबरम्यागजिन डेस्क।
फेक न्यूजको जमानामा
यो हप्ताको अङ्कमा मेरो मित्र डा. बासुले गोएबल्सले झैं भारतमा फेक न्यूज बनाउने कारखाना-कोबारेमा लेखेका छन्। ‘झूठ’ -का यस्ता कारखाना धेरजसो मोदी भक्तहरू नै चलाउँछन्। ‘झूठ’ -को कारखानाबाट जुन हानी हुँदैछ, म सम्पादकीयबाट बताउने कोशिश गर्न चाहन्छु।
केहीदिन अघिमात्र गणेश चतुर्थी थियो। त्यो दिन सोशल मिडियामा एउटा ‘झूठ’ फैलाइयो। फैलाउने सङ्घका मानिसहरू नै थिए।
त्यो ‘झूठ’ के थियो त?
त्यो ‘झूठ’ थियो कर्नाटक सरकारले जहाँ भन्छ, त्यहीँ गणेशजीको प्रतिमा स्थापना गरिनुपर्छ तर त्यसभन्दा अघि दस लाख रुपियाँ जमा गरिनुपर्छ। प्रतिमाको उचाईबारे सरकारसित अनुमति लिइनुपर्नेछ। अन्य धर्मावलम्बीहरू जहाँ बस्छन्, त्यो बाटो विसर्जनको लागि हिँड्न पाइन्न। पटेका पड्काउन पाइन्न।
सङ्घका मानिसहरूले यो ‘झूठ’ खुब फैलाए। यतिजोरले यो ‘झूठ’ फैलियो कि कर्नाटक पुलिस प्रमुख आर के दत्तालाई प्रेस बोलाउनु पऱ्यो। उनले स्पष्टीकरण दिए, सरकारले यस्तो कुनै नियम बनाएको छैन, यी सबै अफवाह हुन्।
यो ‘झूठ’-को सोर्स खोज्दै जाँदा POSTCARD.NEWS नामको वेबसाइट भेटियो, जुन वेबसाइट कट्टर हिन्दुत्ववादीहरूको हो। यसको काम हरेक दिन पेक न्यूज बनाउनु र त्यसलाई सोसल मिडियामा भाइरल बनाउनु हो।
11 अगस्तको POSTCARD.NEWS मा एउटा हेडिङ थियो- कर्नाटकमा तालिबान सरकार।
यही हेडिङमा राज्यभरि ‘झूठ’ फैलाउने कोशिश भयो। सङ्घका मानिसहरू सफल पनि भए।
जो मानिसहरू कुनै न कुनै कारण सिद्धारमैया सरकारदेखि रिसाइबस्छन्, उनीहरूले यो फेक न्यूजलाई हतियार बनाए। सबैभन्दा आश्चर्य र खेदको कुरा हो कि मानिसहरूले जाँचबुझ नगरी फेक न्यूजलाई साँचो माने। आफ्नो कान, नाक, र दिमागको प्रयोग गरेनन्।
पछिल्लो हप्ता जब कोर्टले राम रहिम नामका एक ढोंगी बाबाविरुद्ध बलात्कारको मामिलामा दण्ड सुनायो तब उनीसित बिजेपीका नेताहरूको फोटो सोसल मिडियामा खुब छायो। यी ढोंगी बाबासित मोदीसितै हरियाणाका बिजेपी विधायकहरूको फोटो र भिडियो भाइरल बन्न थाल्यो। यसले बिजेपी र सङ्घका मानिसहरू तनावमा परे। यसैलाई काउन्टर गर्न गुरमित बाबाको छेउमा केरलका सिपिएमका मुख्यमन्त्री पिनराई विजयन बसिरहेको फोटो भाइरल भयो। त्यो फोटोसपमा बनाइएको थियो।
असली फोटोमा काङ्ग्रेसका नेता ओमन चान्डी बसेका छन् तर उनको टाउको काटेर विजयनको टाउको जोडिदियो र सङ्घका मानिसहरूले यसलाई सोसल मिडियामा भाइरल गरिदिए।
यद्धपि, उनीहरू यसमा सफल बनेनन् किन भने केहीबेरमा नै असली फोटो पनि भाइरल बन्यो।
वास्तवमा अघिल्लो वर्षसम्म राष्ट्रीय स्वंयसेवक सङ्घका फेक न्यूज प्रोपोगान्डालाई रोक्न वा त्यसलाई अघि ल्याउने कोही थिएनन्। अहिले धेरै मानिसहरू यस काममा जुटेका छन्। राम्रो कुरा के हो भने पहिले फेक न्यूज चलिबस्थ्यो अहिले असली न्यूज पनि सँगसँगै चल्न थालेको छ अनि मानिसहरूले पनि पढ्न थालेका छन्।
उदाहरणको लागि 15 अगस्तको दिन जब लाल किल्लाबाट प्रधानमन्त्री मोदीले भाषण दिए अनि त्यसको विश्लेषण 17 अगस्तदेखि खुबै भाइरल बन्यो। ध्रुव राठीले त्यो विश्लेषण गरेका थिए। ध्रुव राठी हेर्दा त कलेजियनजस्तो देखिन्थ्यो तर पछिल्लो समयदेखि मोदीको ‘झूठ’ को पोल सोसल मिडियामा खोलिरहेका थिए।
पहिले यो भिडियो हामीजस्ता मानिसहरूले मात्र हेरिरहेका थियौँ, आम मानिसहरूसम्म पुगेको थिएन तर 17अगस्त त्यो भिडिया एक दिनमा एक लाखभन्दा धेरसम्म पुग्यो।
ध्रुव राठीले बताए कि ‘बूसी बसिया’ ( मुख खोल्यो कि झुठ बोल्यो)-को सरकारले राज्य सभामा पहिले भन्यो कि महिनाभरमा 33 लाख नयाँ करदाता आएका छन्। त्योभन्दा अघि पनि वित्त मन्त्री जेटलीले 91 लाख नयाँ करदाता जोडिएको कुरा गरेका थिए। अन्तमा आर्थिक सर्वेमा भनियो कि केवल5लाख 40 हजार नयाँ करदाता जोडिएका छन्।
तब यसमा कुन साँचो हो कुन असत्य?
यही सवाल ध्रुव राठीले आफ्नो भिडियोमा उठाएका थिए।
आजका मेनस्ट्रीम मिडिया केन्द्र सरकार अनि बिजेपीले दिएको आंकडालाई वेद वाक्यजस्तो फैलाउँछन्। मेनस्ट्रीम मिडियालाई सरकारले बोलेको कुरा वेद वाक्य भइसकेको छ। त्यसमा पनि टीभी न्यूज च्यानलहरू छन्, जो यस काममा दस कदम अघि छन्।
उदाहरणको लागि जब रामनाथ कोविन्दले राष्ट्रपति पदको शपथ लिए तब धेरै अङ्ग्रेजी टीभी च्यानलहरूले खबर चलायो र भन्यो- केवल एक घन्टामा ट्वीटरमा राष्ट्रपति कोविन्दका फलोवरको संख्या 30 लाख भइसकेको छ। उनीहरू चिच्याइबसे 30 लाख, 30 लाख।
उसको उद्देश्य थियो कि कति मानिसले कोविन्दलाई सपोर्ट गरिरहेका छन्।
धेरै टीभी च्यानलहरू आज राष्ट्रीय स्वंयसेवक सङ्घको टीमसरह भइसकेका छन्। सङ्घको काम गर्छन्।
वास्तविकता के थियो भने त्यसदिन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको सरकारी अकाउन्ट नयाँ राष्ट्रपतिको नाम गरिएको थियो। जब यो परिवर्तन भयो तब राष्ट्रपति भवनका फलोवर अब कोविन्दका फलोवर बने। ध्यान दिनुपर्ने कुरा त यो पनि हो कि प्रणब मुखर्जीलाई पनि तीस लाखभन्दा धेर मानिसहरूले ट्वीटरमा फलो गर्थे।
अहिले त राष्ट्रीय स्वयंसेवक सङ्घको यसप्रकारले फैलाउने फेक न्यूजको वास्तविकता अघि ल्याउन धेरै मानिसहरू अघि आइसकेका छन्।
ध्रुव राठी भिडियोको माध्यमबाट यो काम गरिरहेका छन्। प्रतीक सिन्हा altnews.in नामको वेबसाइटबाट यो काम गरिरहेका छन्। होक्स स्लेयर, बूम अनि फ्याक्ट चेक नामको वेबसाइट पनि काम गरिरहेको छ। THEWIERE.IN, SCROLL.IN, NEWSLAUNDRY.COM, THEQUINT.COM जस्ता वेबसाइट पनि सक्रिय छ। जसको पनि नाम लिएको छु, उनीहरूले हालैमा पनि धेरै फेक न्यूजको वास्तविकता सामु ल्याइसकेका छन्।
यी कामहरूबाट सङ्घका मानिसहरू रिसले चुर छन्। महत्वपूर्ण कुरा त यो छ कि उनीहरू पैसाको लागि काम गरिरहेका छैनन्। उनीहरूको एउटै उद्देश्य हो कि फासिस्ट मानिसहरूको ‘झूठ’- कारखानाको पर्दाफास।
केही हप्ताअघि बेङ्गलुरुमा भीषण पानी परेको थियो। त्यस समय पनि सङ्घका मानिसहरूले एउटा फोटो भाइरल गरे अनि क्याप्सनमा देखे- नासाले मङ्गल ग्रहमा मानिसहरू हिँडेको फोटो सार्वजनिक गरेको छ।
बङ्गलुरु नगरपालिका बीबीएमसीले बयान दियो कि यो मङ्गल ग्रहको फोटो होइन। सङ्घको उद्देश्य थियो मङ्गलग्रह भनेर बङ्गलुरुको मजाक उडाउनु। मानिसहरूले सम्झुन् बङ्गलुरूमा सिद्धारमैयाको सरकारले केही काम गरेको छैन। यहाँको बाटो भत्किएको छ। यस्तै प्रोपोगान्डा गरेर झुटा खबर खैलाउनु सङ्घको उद्देश्य थियो। तर त्यही उद्देश्य भारी बन्यो, किन भने त्यो फोटो बङ्गलुरूको होइन महाराष्ट्रको थियो। जहाँ बिजेपीको सरकार छ।
हालैमा पश्चिम बङ्गालमा जब दङ्गा भयो तब आरएसएसका मानिसहरूले दुइवटा पोष्टर जारी गरे। एक पोष्टरको क्याप्सन थियो- बङ्गाल जलिरहेको छ। त्यसमा सम्पति जलिरहेको नक्सा थियो। अर्कोमा एक महिलाको सारी तानिरहेको चित्र थियो अनि क्याप्सन थियो- बङ्गालमा हिन्दु महिलाहरूमाथि अत्याचार भइरहेको छ।
छिट्टै यी चित्रहरूको वास्तविकता अघि आयो। पहिलो चित्र 2002 को गुजरात दङ्गाको थियो, अर्को चित्र भोजपुरी फिल्मको एउटा सिनको थियो।
केवल आरएसएस मात्र होइन बिजेपीका केन्द्रिय नेताहरू पनि यस्ता फेक न्यूज फैलाउन माहिर छन्।
उहादरणको लागि, केन्द्रिय मन्त्री नितिन गडकरीले फोटो शेयर गरे, जसमा केही मानिसहरू तिरङ्गा झण्डामा आगो लगाइरहेका थिए।
अहिले गुगल इमेज सर्चको एउटा नयाँ एप्लिकेसन आएको छ। त्यसमा तपाईँ कुनै पनि फोटो हालेर जान्न सक्नुहुन्छ त्यो कहाँ अनि कहिलेको हो।
प्रतीक सिन्हाले यही काम गरे, त्यही एप्लिकेसनको सहयोगमा गडकरीले शेयर गरेको फोटोको वास्तविकता अघि ल्याए। पत्तो लाग्यो कि फोटो हैदरावादको होइन, पाकिस्तानको हो, जहाँ एक प्रतिबन्धित कट्टरपन्थी सङ्गठन भारतको विरोधमा तिरङ्गा जलाइरहेको छ।
यस्तै टिभी प्यानल बहसमा बिजेपीका प्रवक्ता संबित पात्राले भने कि सिमानामा सैनिकलाई तिरङ्गा लहराउनमा कति समस्या छ। फेरि जेएनयू जस्ता विश्वविद्यालमा तिरङ्गा लहराउनमा के समस्या छ? यही प्रश्न गर्दै संवितले एक चित्र देखाए। पछिबाट थाहा लाग्यो त्यो निक्कै चर्चित चित्र थियो तर ती भारतीय होइन अमेरिकी सैनिक हो। दोस्रो विश्व युद्धको बेला अमेरिकी सैनिकहरूले जब जापानको एक द्वीप कब्जा गऱ्यो तब आफ्नो झण्डा लहराएका थिए। तर फोटोसपबाट बनाइएको चित्र देखाएर संबित पात्रा मानिसहरूलाई आँखामा धुलो हालिरहेका थिए। जो उनको लागि निक्कै गाह्रो बन्यो, ट्विटरमा उनको धेरै मजाक उडाइएको थियो।
केन्द्रिय मन्त्री पीयूष गोयलले हालैमा एउटा तस्वीर साझा गरे। लेखे- 50,000 किलोमिटर बाटोमा सरकारले तीस लाख एलईडी बल्ब लगाएको छ। तर जुन तस्वीर उनले लगाएका थिए, त्यो फेक निस्कियो। त्यो फोटो भारतको होइन 2009 को जापानको थियो।
गोयलले पहिले पनि एउटा ट्वीट गरेका थिए कि कोइलाको आपूर्तिबाट सरकार ने 25,900 करोड़ वचत गरेको छ। तर त्यो पनि ‘झूठ’ निस्कियो।
छत्तीसगढ़का पी. डब्ल्यू. डी. मन्त्री राजेश मूणतले एक ब्रिजको फोटो शेयर गरे। आफ्नो सरकारको सफलता बताए। त्यो ट्वीटले 2000 लाइक पायो। पछिबाट थाहा लाग्यो त्यो फोटो छत्तीसगढ़को होइन वियतनामको थियो।
यस्ता फेक न्यूज फैलाउनमा हाम्रो कर्नाटकका आरएसएस अनि बिजेपीका नेताहरू पनि कम छैनन्।
कर्नाटकका सांसद प्रताप सिम्हाले एउटा रिपोर्ट शेयर गरे। भने, यो टाइम्स अफ इण्डियमा आएको हो। त्यसको हेडलाइन थियो- हिन्दू युवतीलाई एक मुसलमानले छुरी हानेर हत्या गऱ्यो। संसारभरका मानिसहरूलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने प्रताप सिंहाले वास्तविकता जान्ने कुनै कोशिश गरेनन्। कुनै पनि पत्रिकाले यस्ता समाचार छापेको थिएन। फोटोसफबाट कुनै अर्को समाचारमा हेडलाइन यस्तो लगाइएको थियो अनि हिन्दू-मुस्लिमको रङ लगाइएको थियो।
यसको लागि टाइम्स अफ इण्डियाको नाम प्रयोग गरियो, जब यो फेक न्यूज भनेर भाइरल बन्यो तर सांसदले डिलिट हानिदिए तर माफी मागेनन्। साम्प्रादायिक ‘झूठ’ फैलाएकोमा कुनै पश्चताप पनि गरेनन्।
जस्तो कि मेरो मित्र वासुले यसपल्टको स्तम्भमा लेखेका छन्, मैले पनि एउटा फेक न्यूज सेयर गरें। पछिल्लो आइतबार पटनाको आफ्नो ऱ्यालीको तस्वीर लालू यादवले फोटोशाप गरेर साझा गरिदिए। केहीक्षणपछि मित्र शशिधरले बताए कि फोटो फर्जी हो, नक्कली हो मैले तुरन्तै हटाएँ अनि गल्ती स्वीकारेँ।
यतिमात्र होइन असली र नकल्ली दुवै एकैचोटी हालेर ट्वीट पनि गरें, यो साम्प्रादायिक हिंसा फैलाउन र प्रोपोगान्डा गर्न होइन फोसिस्टहरूको विरुद्ध मानिसहरू भेला भइरहेका थिए, यसको सन्देश दिनु मेरो उद्देश्य थियो।
अन्तमा, जसले पनि फेक न्यूज एक्सपोज़ गर्छन्, उनलाई मेरो सलाम। म ठान्छु, यसको संख्या अझ बढेर जाउन्।
विमल गुरूङले चौकबजारबाटै दिए भाषण, विनय-अनितलाई पार्टीमा फर्किने अपील